जैविक विकास र जेनेटिक परिवर्तन
by रेजिना बेली
जैविक विकास को जनसंख्या मा धेरै आनुवंशिक परिवर्तन को रूप मा परिभाषित गरिएको छ जुन धेरै पीढ़ीहरु मा जन्म दिइन्छ । यी परिवर्तनहरू सानो वा ठूलो, ध्यानयोग्य वा होसियार नहुन सक्छ। घटनाको विकासलाई एक विकासको उदाहरण मान्नको लागि, आबादी जनसंख्याको आनुवंशिक स्तरमा हुन्छ र एक पीढीबाट अर्को सम्म पास हुन्छ। यसको मतलब यो जीन , वा बढी विशेष गरी, आबादीको ईलिले परिवर्तन र पारित हुन्छ।
यी परिवर्तनहरू फिनेटोपीहरू (जनसंख्याको व्यक्तिक शारीरिक विशेषताहरू देख्न सकिन्छ) मा देखिन्छ।
जनसंख्याको आनुवंशिक स्तरमा परिवर्तन एक सानो-सानो परिवर्तनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र माइक्रोभोल्युल भनिन्छ। जैविक विकासमा पनि यो विचार समावेश छ कि सबै जीवन जोडिएको छ र फेरि एक साधारण पुर्खालाई पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसलाई म्याक्रोइभोल्युसन भनिन्छ।
के इभोल्युसन होइन
जैविक विकास को परिभाषित गर्न को लागी बस समय को बदलन को रूप मा नहीं। थुप्रै जीवहरू समयको साथ परिवर्तनहरू अनुभव गर्दछ जस्तै वजन घटाने वा लाभ। यी परिवर्तनहरूलाई विकासको उदाहरणहरू मानिन्छ किनभने तिनीहरू आनुवंशिक परिवर्तनहरू छैनन् जुन अर्को पीढीमा पास गर्न सकिन्छ।
के इभोल्युसन एक थ्योरी हो?
इभोल्युशन एक वैज्ञानिक सिद्धान्त हो जुन चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्ताव गरिएको थियो। एक वैज्ञानिक सिद्धान्तले स्वाभाविक घटनाको लागि स्पष्टीकरण र भविष्यवाणीको आधारमा अवलोकन र प्रयोगमा आधारित गर्दछ। यस प्रकारको सिद्धान्तले व्याख्या गर्न को लागी व्याख्या गर्न को लागी प्राकृतिक दुनिया काम मा कसरि घटनाहरु।
एक वैज्ञानिक सिद्धान्त को परिभाषा सिद्धान्त को सामान्य अर्थ बाट अलग छ, जुन अनुमानको रूपमा परिभाषित गरिएको छ वा एक विशेष प्रक्रियाको बारेमा अवधारणा। यसको विपरीत, एक राम्रो वैज्ञानिक सिद्धान्त परीक्षणयोग्य, बेवास्ता गर्न, र वास्तविक सबूत द्वारा प्रमाणित हुनु पर्छ।
जब यो एक वैज्ञानिक सिद्धान्त आउँछ, त्यहाँ कुनै पूर्ण प्रमाण छैन।
यो एक विशेष घटनाका लागि व्यावहारिक स्वीकृतिको रूपमा एक सिद्धान्त को स्वीकार्यता को पुष्टि को एक मामला हो।
प्राकृतिक चयन प्रक्रिया हो जुन जैविक विकासवादी परिवर्तन हुन्छ। प्राकृतिक चयन जनसंख्या मा कार्य गर्दछ र व्यक्तिहरु। यो निम्न अवधारणाहरूमा आधारित छ:
आबादीमा भएका व्यक्तिहरू विभेद हुन सक्ने विभिन्न विशेषताहरू छन्।
यी व्यक्तिले पर्यावरणलाई समर्थन गर्न भन्दा बढी जवान उत्पादन गर्छन्।
आबादीमा व्यक्ति जुन उनीहरूको वातावरणमा उत्तम उपयुक्त छन् व्यक्तिहरूले अधिक सन्तानलाई छोड्ने, आबादीको आनुवंशिक मेकअपमा परिवर्तन गर्दछन्।
आनुवंशिक भिन्नता जो आनुवंशिक भिन्नताले मौका पाउँछ, तर प्राकृतिक चयनको प्रक्रियाले गर्दैन। प्राकृतिक चयन आबादी र वातावरणमा आनुवंशिक विविधता बीचको कुराकानीको परिणाम हो।
वातावरण निर्धारण गर्दछ जुन कुन विविधताहरू अधिक अनुकूल छ। व्यक्तिहरू जुन तिनीहरूको वातावरणमा राम्रो उपयुक्त छन् जुन विशेषताहरू अन्य व्यक्तिका भन्दा बढी सन्तान उत्पादन गर्न जीवित रहन्छन्। अधिक अनुकूल विशेषताहरू यसैले जनसंख्यामा सम्पूर्ण रूपमा बितेका छन्। जनसंख्यामा आनुवंशिक भिन्नताका उदाहरणहरू मार्नीभक्षी पौधहरू , परिमार्जनहरूसँग चीताहहरू , उड्ने साँपहरू , जनावरहरू मरेका छन् र पातहरू जस्तै जनावरहरू छन् ।
जनसांख्यक परिवर्तन कसरी जनसंख्यामा कहिले हुन्छ?
जेनेटिक भिन्नता मुख्य रूप देखि डीएनए उत्परिवर्तन , जीन प्रवाह (एक जनसंख्या देखि अन्य जीनों को आंदोलन) को माध्यम ले होती है और यौन प्रजनन । यस तथ्यले गर्दा वातावरण अस्थिर हुन्छ, जनसंख्या आनुवांशिक रूपान्तरित चर हो जो कि परिस्थिति परिस्थितिका भन्दा राम्रो परिमार्जन गर्न सक्षम हुनेछ जुन आनुवंशिक भिन्नताहरू समावेश गर्दैन।
यौन प्रजननमा आनुवंशिक भिन्नताहरूको लागि आनुवंशिक पुनरुत्थानको माध्यमबाट उत्पन्न हुन्छ। पुन: सम्मोहन माइईसिसको समयमा हुन्छ र एक क्रोमोजोममा एल्ल्सहरूको नयाँ संयोजन उत्पादन गर्ने तरिका प्रदान गर्दछ। मेईसिसको समयमा स्वतन्त्र वर्गीकरण जीनको संयोजनको अनिश्चितकालीन संख्याको लागि अनुमति दिन्छ।
यौन प्रजननले जनसंख्यामा अनुकूल जीन संयोजनहरू सम्बोधन गर्न वा जनसंख्याबाट प्रतिकूल जीन संयोजन हटाउन सम्भव बनाउँछ।
अधिक उपयुक्त आनुवंशिक संयोजन संग जनसंख्या आफ्नो वातावरण मा जीवित रहेंगे र अधिक सन्तानहरु लाई कम अनुकूल आनुवंशिक संयोजन संग तुलना मा पुनरुत्थान गर्नेछन्।
जैविक इभोल्युशन बनाम सिर्जना
विकासको सिद्धान्तले अहिलेसम्म यसको परिचयको समयबाट विवाद उत्पन्न गरेको छ। विवाद यस धारणा देखि ग्रस्त हुन्छ कि जैविक विकास को ईश्वरीय निर्माता को आवश्यकता को विषय मा धर्म संग बाधाहरु मा छ। इभोल्युलेस्टिसहरूले यो विकासले परमेश्वरलाई अवस्थित गर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्दैन, तर प्राकृतिक प्रक्रियाहरू कसरी काम गर्ने व्याख्या गर्न प्रयास गर्छ।
त्यसो गर्दा, तथापि, त्यहाँ कुनै तथ्यलाई बचाउन सकिँदैन कि विकासले केही धार्मिक विश्वासहरूको केहि पक्षहरूसँग विरोध गर्दछ। उदाहरणको लागि, जीवनको अस्तित्व र रचनाको बाइबिल खाताको लागि विकासवादी खाता धेरै फरक छन्।
इभोल्युसनले थाहा छ कि सबै जीवन जोडिएको छ र एक साधारण पुर्खालाई फिर्ता पाउन सकिन्छ। बाइबिल निर्माणको एक शाब्दिक व्याख्याले बताउँछ कि जीवन सबै शक्तिशाली, अलौकिक (भगवान) द्वारा बनाईएको थियो।
अझै पनि, अरूले यी दुई अवधारणाहरूलाई मर्ज गर्न खोजेको छ कि यो विकासले ईश्वरको अस्तित्वको सम्भावनालाई बहिष्कार गर्दैन, तर मात्र उहाँले बताउनुभयो कि परमेश्वरले जीवन सृष्टि गर्नुभयो। यो दृश्य, तथापि, बाइबलको व्याख्या को रूप मा प्रस्तुत को एक शाब्दिक व्याख्या को विरोध गर्दछ।
मुद्दालाई तल पार्दै, दुई विचारहरू बीचको विवादको मुख्य हड्डी म्याक्रोभोल्युसनको अवधारणा हो। सबैभन्दा बढी भागका लागि, विकासवादीहरू र सिर्जनाकर्ताहरूले सन्तुलित हुन्छ कि प्रकृतिमा देखिन्छन्।
तथापि, म्याक्रोभोल्युसन प्रजातन्त्रको स्तरमा पुग्ने विकासको प्रक्रियालाई बुझाउँछ, जसमा एक प्रजातिले अर्को प्रजातिबाट विकसित हुन्छ। यो बाइबिल दृष्टिकोणको दृष्टान्त विपरीत हो कि भगवान व्यक्तिगत रूपमा जीवित जीवहरु को निर्माण र निर्माण मा संलग्न थिए।
अहिलेको लागि, विकास / निर्माण बहस जारी छ र यो देखिन्छ कि यी दुई विचारहरू बीचको भिन्नता कुनै पनि समय चाँडै बसेर सम्भव छैन।
अंग्रेजीमा मेट्रिक कन्भेन्चर - इकाई रद्द गर्ने विधि
आणविक ज्यामिति परिभाषा - रसायन शास्त्र शब्द
कसरी म्यागनेट काम गर्दछ
एसिड बेस शीर्षक परिभाषा
5 प्रकारको उत्तर अमेरिकी वायु सेना
साधारण पदार्थहरूको रासायनिक नाम
गोलो खनिज पहिचान गर्न गाइड
बैलेंस समीकरण कसरि - प्रिंटयोग्य वर्कशीट
कसरी भौतिकी काम गर्दछ
जवियर विश्वविद्यालय लुइसियाना जीपीए, एसएट र एक्ट डेटा
जापानी भाषा लेख गर्दै
9 इराक र अफगानिस्तानमा युद्धहरूको बारेमा उत्कृष्ट वृत्तचित्रहरू
इतिहास को किलर - स्टेफनी क्युलेक
चार्ज गर्ने हिंसा के हो?
कसरी फ्रांसीसी शब्द "एग्रीरे" (सहमत गर्न को लागी)
अधिक प्रयोगका लागि 'एस्टार'
एडमिरिर हेराइडिन बारबारोस्सा
कोरियाली युद्ध: एक अवलोकन
हॉकीको पहिलो लाख डलरको मानिस को थियो?
किन ट्रांसमिशन धातुहरू टेलिभिजन मेटलहरू छन्?
कोच सुरुङ लङ जिपर्स
थर्मोडायमिकी र इभोल्युसनको दोस्रो नियम
ज्ञानको गहिरो के हो?
युरोपमा शीत युद्ध
टोनी ब्राक्सटनको दस सबैभन्दा ठूलो हिट्स
ग्रेटर वा कार्यशैली भन्दा कम 20 सम्म
स्थानीय समय - कसरी वर्तमान समय पर्ल मा भन्नुहोस्
साझेदारी गरिएका मुद्राहरू - डलरकरण र मुद्रा युनियनहरू
कोक्स - नाम अर्थ र उत्पत्ति